hataru/हटारु: हटारुको नाउँमा
हटारु गाउँ फर्किएपछि भुराभुरीका दसै/तिहार नै फर्केजस्तो लाथ्यो । हातहातमा गुर(भेली)का डल्ला बोकेर प्रत्येक घरमा बाँड्दैजान्थ्यौं, 'लौ ठूल्जेई! हटारुको पाहुर।'
गुरको गुलियोमा भुलेर खुबै खेल्थ्यौं, धुलोमा । घामले नेटो काटेपछि शरीरभर उम्रेका काँडाको पनि कुनै परबाह हुन्न'थ्यो । भकारामा गाइर्ं लिएर आउँथे र गाली गर्थे तब मात्र टाप ठोक्थ्यौं ।
बालापनमै सुनिएको 'हटारु' नाम म किशोर हुँदैजाँदा छोटिदैआयो । नुनको 'हाट' नजिक नजिक सर्दैआयो । अचेल गाउँनजिकै रहेको सानीगार बजारबाट लिएर आउँछन्, नुन । हाट जानुपर्दैन । नुनको हाट जान छाडेपछि सायद 'हटारु' शव्द पनि हरायो, क्यार । पछिल्लो पुस्ताका लागि पनि हटारु शब्दसँग चिनजान छैन । रोल्पाका लोकगीतसँगै यो 'हटारु' शव्द नेटोमा पुगिसकेको छ ।
सम्झना छ, कुनै बेला ठूलदाइले एउटा पत्रिका लिनुभएको थियो। नाम थियो,'हटारु।' कृष्णबहादुर महराको, माओवादी नेता, सम्पादनमा निस्केको रोल्पाको त्यो पत्रिका अहिले एक प्रति पनि सुरक्षित छैन। पत्रिकाको कभर चित्र बनाएका थिए, मेरा गुरु कुलानन्द गिरीले। चित्र थियो, नुनको हाटबाट फर्किरहेको एक रोल्पालीको।
पत्रिकाभित्रका सामग्री के थिए? कस्ता थिए? पढ्न पाइनँ या, पढ्न जानिनँ? मलाई थाहा छैन । तर, त्यसको कभरमा रहेको हटारुको चित्र भने आँखामा उभिएको छ। अझै पनि मलाई याद छ।
हाटबजार जानेलाई 'हटारु' भनेको हो कि? भनेर केही साथीहरुले जिज्ञासा राखे।
त्यसो होइन। किनभने रोल्पातिर 'हाट' लाग्दैन। चलन छैन।
वर्षमा एकखेप नुन बोक्न जानुलाई 'हाट जाने' र जाने मान्छेलाई 'हटारु' भन्ने चलन छ।
कुनै बेला हाम्रा पुर्खा नुन लिन भोट जान्थे रे। त्यसपछि? नुनको हाट सर्दैआएछ । भोटपछि नेपालगाज, बटौलीखसौली(बुटवल)।
त्यसपछि? कोइलाबास सरेछ। लामो समयसम्म कोइलाबासमै 'हाट' बसेछ। त्यसैले होला, कोइलाबास हाटसँग जोडिएका थुप्रै रोल्पाली लोकगीत बने।
रोल्पाली जीवनशैलीसँग जोडिएको 'हटारु' कतै साँच्न पाए हुन्थ्योजस्तो लाग्थ्यो, बेलाबेलामा। कुन बेला? जुनबेला रोल्पाली पाका मान्छेसँग भेटघाट हुन्थ्यो। पुराना कुरा उप्कन्थे। त्यसपछि? हाटका कुरा किन छुट्थे र? त्यसपछि? हररर तिर्खा लाग्थ्यो, 'कतै यसलाई साँच्न पाए?' तर, राख्ने कहाँ? साँच्ने कहाँ? जो डाइनोसर हुँदैथियो/भइसकेको थियो।
म जति आधुनिक भए पनि मेरो जरा 'हटारु'सँगै जोडिएको छ । के जरा कसैले भुल्न सक्छ? सायद, यसैले होला, हटारु शब्दसँग जति धेरै मान्छे अपरिचित भए पनि मेरा लागि सबैभन्दा पि्रय छ । धेरैले नजाने पनि मेरो लागि, मेरो ठाउँको लागि, रोल्पालीको जीवनदर्शनसँग जोडिएको शव्द हो, हटारु ।
मलाई विश्वास छ, मेरा आदरणीय पाठकहरुले पनि यसलाई यहीरुपमा स्वीकार्नुहुनेछ ।
Posted by Nabin Bibhas at 10:27 AM
Anonymous November 11, 2009 at 3:04 AM
great job dai like it
Mahesh Prasad Bhatt
Thanks for your meaningful explanation of the word 'HATARU'. When I saw it first time I thought it is 'HATHARU' but now I can understand its meaning in your life.
Anonymous November 11, 2009 at 4:03 AM
Gambahadur Shreesh Magar
ह्तारुको व्याख्या दिएकोमा खुसि लाग्यो ।
Ashesh November 11, 2009 at 7:19 AM
मैले पनि जाँने हटारू को अर्थ ।
Mina Thapa magar November 13, 2009 at 12:20 AM
Hajurko name 'Hataru' ko meaning bujne mero curiosity balla metio. yesto historical meaning......!!! i so glad with your name, its meaningful. loss bhairaheko hamra yesta hostorical meaning haru sadhaibhari yesari nai national & international worldsitharuma sadai jibit rahirahos.